कैलाशको कुटी: सिरियल हैन ग्याँस
Posted by कैलाश at 1:08 PM
दैनिक जीबनको पिडालाई साह्रै सटीक लेखाइद्वारा पेश गर्नुभएको छ। यो समस्याको कहिले अन्त्य होला?!
बाफ रे बाफ ... यस्ता यस्ता सक्षमहरुले शासन चलाएर हिन्दिमा सपथ खावदा पनि किन यस्तो समस्या होला?
दशैंमा घर जाँउला भनेको त तपाईको टाँसो पढे पछि डर पो लाग्दै छ।
लौ दिलीप जी नडराउनु है। यहाँ बसेर त्यही समस्यासँग जुध्नेहरु ढुक्कै दशैँको तयारीमा लागीसकेका छन् नि। जसरी नि समाधान त भइहाल्छ नि त्यसो त। के गर्नु नयाँ नेपालको नयाँ नयाँ उपाय र नयै चाला।
खै के भन्ने ? दशैं आ'को बेला भात पकाउने ग्याँस पनि नहुँदा बोरै हुँदो हो नि अन्त के को कसौटीको कुरा हुन्थ्यो त ।